Glassware, ဖန်ပုလင်း, ဖန်ပုလင်း - Pretty
ဤ website မှကြိုဆိုပါ၏!
Glass ကိုအဖျော်ယမကာ Bottle သ
Glass ကိုဗော့ဒ်ကာ Bottle သ
Glass ကိုဝီစကီ Bottle သ
Glass ကို Mini ကို Bottle သ
Glass ကိုအနီရောင်ဝိုင် Bottle သ
Glass ကိုဘော်ဒိုး Bottle သ
Glass ကို Burgundy Bottle သ
Glass ကိုဘီယာ Bottle သ
Glass ကို Electroplating Bottle သ
Glass ကိုရှန်ပိန် Bottle သ
Glass ကို sparkling ဝိုင် Bottle သ
Glass ကိုထိပ်တန်း Bottle သ Swing
Glass ကိုကော်ဖီ Bottle သ
Glass ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံ Bottle သ (ဘော်စတွန် Glass ကို Bottle သ)
Glass ကိုသံလွင်ဆီ Bottle သ
Glass ကိုလက်သည်းပိုလန် Bottle သ
Glass ကို Cream ပုလင်း
Glass ကိုမျက်လုံး Cream ပုလင်း
Glass ကိုအမွှေးနံ့သာ Bottle သ
Glass ကို Handwashing Bottle သ
Glass ကိုရိဒ်ပျံ့ Bottle သ
စိတ်တိုင်းကျစမတ်ကဒ် & RFID ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်
Xuzhou Pretty Glass ကိုကုန်ပစ္စည်းများ Co. , Ltd ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် Xuzhou စီးတီး, မြောက်ဘက်တရုတ်ပြည်ရှိဖန်ထည်နှင့်အဖန်ပုလင်းများပေးသွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျနော်တို့ 20 ရှိစသည်တို့ကိုဖန် & ကြည်လင်ဆေးလိပ်ပြာခွက်, decanters, ဖန်ဖလား, သကြားလုံးအိုး, ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူ, ဖန်ခွက်, စပျစ်ရည်ကိုမျက်မှန်, ခဲအခမဲ့ကြည်လင် stemware, ဖန်ပန်းအိုး, ဖန်ပြား, ဖန် jugs နှင့်အိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့အထူး ဖန်ထုတ်ကုန်များလိုင်းအတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း။ ကျယ်ပြန့်, ကောင်းသောအရည်အသွေး, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများနှင့်စတိုင်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးအိမ်မှာနေတဲ့အဆင်သင့်ဂုဏ်သတင်းကိုခံစားခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှု abroad.The key ကိုကျနော်တို့ဖောက်သည်ထံမှမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ထိရောက်အသင်းရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ကား Glass ကိုအိုးပေးသွင်း & Manufactu ...
ပြင်သစ်ရင်ပြင် Glass ကို Bottle သ
နို့ Glass ကို Bottle သ
flat အေးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် Glass ကို Bottle သ
10 နှစ်ကျော်၏အတှေ့အကွုံထုတ်လုပ်အတူ RFID နဲ့ NFC ထုတ်ကုန် , ကျနော်တို့ကနေလွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိ ကုန်ကြမ်းအင်းလေးပစ္စည်း မှ ချော RFID ထုတ်ကုန်.
OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်အမိန့်နှစ်ဦးစလုံးအကြှနျုပျတို့သညျတင်သွင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနှင့်သင့်ဖောက်သည်များကျေနပ်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်များမှာ!
တိုင်းအဆင့်က ISO 9001 ကအုပ်ချုပ်သည်: 2008 လက်မှတ်
အရည်အသွေး, စမတ်ကဒ်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, တိုင်း MoreRFID ထုတ်ကုန်တင်းကျပ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူထုတ်လုပ်သည်အသက်ပေတည်းကို 100% QC နှင့်တိုင်းခြေလှမ်းက ISO 9001 အားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည်: 2008 လက်မှတ်ရုံတစ်အမြန်ကိုးကားယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
နေရပ်လိပ်စာ: အခန်း 329, Block ကို B ကို, ZHIHE အဆောက်အအုံ, ဆော့ဝဲပန်းခြံ Xuzhou စီးပွားရေးဇုန်ပြီးတော့နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်, Jiangsu ပြည်နယ်, တရုတ်
E-Mail က: jack@prettyglassbottle.com
glass jar, glass ကိုဖလား, အရက် Glass ကို Bottle သ, ဘော်စတွန် Glass ကို Bottle သ,